ကျပ်သိန်း ၆ဝဝဝ ကျော် ကုန်ကျခဲ့သည့် ဓမ္မဒူတ လေးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ရေစက်ချ လှူဒါန်းပွဲနှင်?? - Yangon Media Group
ကျပ်သိန်း ၆ဝဝဝ ကျော် ကုန်ကျခဲ့သည့် ဓမ္မဒူတ လေးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ရေစက်ချ လှူဒါန်းပွဲနှင်??
ရွှေပြည်သာ၊ ဧပြီ ၁၉
ကျပ်သိန်း ၆ဝဝဝ ကျော်ကုန်ကျခဲ့သည့် ဓမ္မဒူတလေးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ရေစက်ချလှူဒါန်းပွဲတွင် သံဃာအပါး ၁ဝဝဝ ကျော် မဟာသံဃိက ပူဇော်ပွဲအား ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”ကမ္ဘာမြေကြီး တုန်ဟည်းလာအောင် သာသနာပြုနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးမြတ် ဖြစ်ပါစေဆိုပြီး မေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့ အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီကို ဒီအလှူပွဲကြီးကိုအကြောင်း ပြုပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာပါ။ ဒီအထူးပူဇော်ပွဲကြီးကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ တပည့်ဒါယကာတွေကို ဖိတ်ကြားပြီးတော့ ဘဝတစ်သက်တာမှာ တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ ရွှေ ပြည်သာမှာ လုပ်ဖြစ်တာပါ။ လေး လကျော်အချိန်ယူကာ ကော်မတီ တွေအသီးသီးဖွဲ့ပြီး တက်ညီလက် ညီလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ”ဟု နွားဦးတိုက်ဆရာတော် အရှင်ဥာဏာ လင်္ကာရက မိန့်ကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေ ပြည်သာမြို့နယ် အမှတ် (၈)ရပ်ကွက် ယောမင်းကြီးလမ်း ဓမ္မဒူတလေး ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ရေစက် ချလှူဒါန်းပွဲတွင် တိပိဋကသုံးပုံ ဆောင် ဆရာတော် ၁ဝ ပါးအား အထူးပူဇော်ပွဲနှင့်သံဃာအပါး ၁ဝဝဝ မဟာသံဃိက ပူဇော်ပွဲကြီး ကိုလည်း တွဲဖက်၍ ဧပြီ ၁၉ ရက် နံနက် ၆ နာရီအချိန်မှ ညပိုင်း တရားပွဲပြီးဆုံးသည်အထိ တစ်ဆက်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ နံနက် ၆ နာရီအချိန်မှ စတင် ကာ ပင့်လျှောက်ထားသည့် သံဃာ တော်အရှင်သူမြတ်များကြွရောက်လာကြပြီး ဓမ္မဒူတလေးထပ်ကျောင်း ဆောင်ကြီး၏ ဒုတိယထပ်တွင် ဒံ ပေါက်ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ ကြသည်။
အဆိုပါပွဲတွင် တိပိဋက သုံးပုံဆောင်ဆရာတော် ၁ဝပါးမှ ရှစ် ပါးကြွရောက်ခဲ့ပြီး ပိဋကတ်နှစ်ပုံ ဆောင် ဆရာတော်နှစ်ပါး ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ကြွရောက်ခဲ့ကြပြီး ဆရာ တော်တစ်ပါးလျှင် ကျပ်ဆယ်သိန်း သင်္ကန်းတစ်စုံနှင့် သပိတ်တစ်လုံးတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ယင်းအပြင် ပင့်လျှောက်ထားသည့် သံဃာအပါး ၁ဝဝဝ အား တစ်ပါးလျှင် ကျပ်တစ်သိန်း၊ သင်္ကန်း တစ်စုံနှင့် သပိတ်တစ်လုံးတို့အား ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ တက်ရောက်လာသည့် လူပရိသတ် တစ်သောင်းကျော်ခန့်ကိုလည်း နံနက် ၆ နာရီအချိန်မှ စ တင်ကာ ကြက်သားဟင်း၊ သီးစုံ ချဉ်ဟင်း၊ ငါးပိကြော်တို့ဖြင့် စတု ဒိသာ တစ်နေကုန် ဧည့်ခံကျွေးမွေး လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
ညပိုင်းအစီအစဉ်တွင် တိပိဋကသုံးပုံဆောင် ဆရာတော်ဆယ် ပါး အထူးပူဇော်ပွဲနှင့် ယောဆရာ တော်ဘုရားကြီး၏ အထူးတရား ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင်လည်း တရားပွဲကြွရောက်သည့် သံဃာတစ်ပါးလျှင် သင်္ကန်းတစ်စုံစီ လှူ ဒါန်းခဲ့ကြသည်။ တရားပွဲသို့ကြွရောက်သည့်တရားနာပရိသတ်များကိုလည်း တစ်ဦးတည်းအလှူရှင် ကိုကြည်လင်း (ရွှေမြ Electronic) မိသားစုမှ လှူဒါန်းသည့် ကြာဆံကြော် ပိဿာ ချိန် ၁ဝဝအား ညနေ ၄ နာရီအ ချိန်မှ ညပိုင်းအထိ ဧည့်ခံကျွေးမွေး ခဲ့ကြသည်။
”ဓမ္မဒူတလေးထပ်ကျောင်း ဆောင်ကြီးကို နွားဦးတိုက်ဆရာ တော်ရဲ့ ဓမ္မပူဇာငွေတွေနဲ့မတည် ပြီး ခုနစ်ရက်သားသမီး ပေါင်းစု လှူဒါန်းတဲ့ အလှူငွေစုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၆ဝဝဝကျော် ကုန်ကျ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုရေစက်ချလှူဒါန်းတာပါ။ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသေးတဲ့သံဃာအပါး ၁ဝဝဝ မဟာသံဃိကပူဇော်ပွဲနဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် ဆရာတော်ဆယ်ပါးကို တစ်နေရာတည်းမှာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖူးမြော် ကြည်ညိုနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကိုရ တာပါ။ ရပ်နီး ရပ်ဝေးက ကုသိုလ်ရှင်တွေ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ သာသနာ့နွယ်ဝင် သူတော် စင်ရဟန်းသံဃာ လူပရိသတ်အ များကြီးပဲ ကြက်ပျံမကျစည်ကားပါ တယ်” ဟု မဟာသံဃိကပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်စား ကော်မတီ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးကျော်မိုးလှိုင်ကပြောသည်။
တွံတေးမြို့နယ်၊ ကျုံပျော်မြို့ နယ်နှင့် တောင်စွန်းမြို့နယ်တို့မှ သံဃာတော် ၇ဝဝ နီးပါးခန့်နှင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင်း သီတင်းသုံး သည့် သံဃာအပါး ၄ဝဝခန့်ြ<ွက ရောက် အလှူခံတော်မူခဲ့ကြောင်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်နိုင်ဦး ထံမှ သိရသည်။
မေ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဝင်းအတွင်း တစ်လမ်းမောင်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည် တ??
ဝက်လက်မြို့နယ်တွင် ထမင်းအိုး တည်ထားရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ အိမ်ခြေ ၂ လုံး၊ နွားစာတိုက် ၁၄
ပေါ်ဆန်းဆန်သစ် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် တစ်သောင်းကျော်ခန့် ဈေးကျနေသော်လည်း ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းဟောင်း ??
တရုတ်အရှေ့ပိုင်း ဓာတုစက်ရုံ ပေါက်ကွဲ၊ ၄၄ ဦးသေဆုံး
ဂျပန်နိုင်ငံ နှင်းလျှောစီး အပန်းဖြေ စခန်းအနီးရှိ မီးတောင်ပေါက်ကွဲ
မြောက်ဦးဒေသကို စစ်မဲ့ဇုန်အဖြစ် အမြန်ဆုံး သတ်မှတ်ပေးရန် အဖွဲ့ပေါင်းတစ်ရာကျော် တောင်းဆို